काठमाडौँ : चर्चित संचारकर्मी रबि लामिछाने ‘सिधा कुरा जनतासँग’ न्यूज २४ कार्यक्रम बाट बाहिरे पनि कार्यक्रमको चर्चा भने हुन छाडेको छैन।
पछिलो समय कार्यक्रम सम्झना भुजेलले सञ्चालन गरि रहेकी छिन सामाजिक संजाल भरि रबि र सम्झनाको चर्चा परि चर्चा भई रहेको छ । उनको कर्याक्रम लाई हेर्ने दर्सकहरुले मिश्रीत प्रतिक्रियदिएका छन् ।
उनको कार्यक्रम हेरे पछि केहि दर्सकले यस्तो पनि लेखेका छन् सिधा कुरा जनतासंगको नब प्रस्तोता सम्झना भुजेलको प्रस्तुत दमदार लाग्यो बधाई तथा कार्य सफलताको शुभकामना।
सन्चालकले जे गर भन्यो बिचरा त्यही गर्ने हो।हो रबि दाजुको जस्तो नहोला।एक रबिले मात्र देस बन्दैन।रबिजस्ता हजारौ रबिहरु जन्मनुपर्छ देस बनाउन।यो कार्यक्रम कसैको बिर्ता होइन।यति बोल्न सक्ने त्यो पनि लाइभ टेलीभिजनमा! छ तिमिमा हिम्मत?
Best wishes #Samjhana_Bhujel
नारीले केहि पनि गर्न सक्दैनन् र केहि पनि बोल्न जान्दैनन् भन्ने केहि लम्फुहरुको सोचलाई सम्झना भुजेलको यो राष्ट्र प्रतिको प्रस्तुतिले दनका दिएकी छिन।
पुरुष प्रदान देश मा महिला ले नी केही गर्न सक्छन् र आफू संग भएको क्षमता प्रस्फुटन गर्नु पर्छ । सलुट सम्झना sis ?✊
२०७७ माघ २१, बुधबार ११:०३ गते 1 Minute 934 Views